Ụzọ ụgbọ okporo ígwè na ụzọ awara awara
N'ikwekọ na mkpebi nke Metrolọ Ọrụ Nkwuputa Obodo Obodo nke Istanbul mere na nnọkọ ikpeazụ tupu ezumike ahụ, ọrụ ndị ahụ na-adọba ụgbọala nke Bayrampaşa Bus Station, bụ nke agafere na İSPARK, bịara na njedebe. Ewepuala ụlọ ochie ochie, ma dochie ndị ọhụrụ. Ndị otu İSTAÇ sachara ogige ntụrụndụ nke ọdụ ụgbọ ala, bụ nke a na-esighị esị. Nchebe na mpaghara [More ...]
Obodo ukwu, nke na-ebute ebumnuche njem na 'obodo a dị ugbu a ma dịkwa mfe ịnweta' na Bursa, na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ehihie na abalị n'okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè. Iji hụ na ụmụ amaala nwere ike ịga njem n'ime obodo nke ọma na nchekwa, [More ...]
Turkey Mbụ Obodo na National efe Car 'Cezeri'
Ọ mara ọkwa na ha kwadebe Baykur ụzụ Manager Selcuk Bayraktar, Turkey mbụ na-efe efe ụgbọ ala prototype na mma na mpaghara na mba ahụmahụ nweela na aerospace na-agbachitere ụlọ ọrụ kwa ụbọchị. Ihe dị ka ọnwa 8 maka imebe na mmepe nke ụgbọ elu na-efe efe [More ...]
Onye isi ala remBB Ekrem İmamoğlu kwagara Kabataş mgbe nyochachara ya na ndagwurugwu ndụ ọhụrụ na Tuzla. Am Martı project ”na Kabataş - Mahmutbey metro line, İmamoğlu mere nyocha nke mbu na Kabataş - Üsküdar ugbo, emesịa Kabataş - Taksim. [More ...]
Zọ a gbanwere n’etiti Akkopru Ivedik Metro Stations
Obodo Ankara na-arụ ọrụ nlezianya anya iji gboo mkpa na-abawanye ụba nke ndị isi obodo na iji hụ na njem ha dị mfe. N'aka nke ọzọ, Ndi Mọnịsta bidoro ọrụ bọs n'okporo ụzọ ndị ọhụrụ na ndozi usoro obodo ndị dị ugbu a na bọs. [More ...]
Onye isi nyocha TCDD Uygun nyochachara na ọdụ ụgbọ ala Van Kapikoy
Onye isi njikwa nke TCDD, Ali İhsan Uygun, TCDD Taşımacılık A.Ş. Onye isi njikwa Erol Arıkan tinyere ọnụ ọgụgụ ndị njem, Van Kapikoy Station kwuru. Gaa leta ọnụ ụzọ ndị na-ahụ maka mbubata ihe maka Kapikoy maka mbubata na mbupụ [More ...]
Onye mbu ọzọ sitere na SAMULAŞ Academy, ‘EMPATİ’ ga-eme!
Samsun Obodo Obodo SAMULAŞ gbakwunyere ndị ọrụ ya ọzụzụ ọzụzụ ọhụrụ. Ndị ọrụ SAMULAS, 'Ọzụzụ Ndị Ọzụzụ' n'okpuru 'Ọzụzụ Ndị Na - ahụ Ọkpụkpụ' Samsun Metropolitan Municipality Project Transportation Reconstruction Yat. San. ve T. A.Ş. (SAMULAŞ), 'ationgbọ njem [More ...]
Onye isi njikwa TCDD Uygun 5.Regional Directorate
Onye isi njikwa TCDD Ali İhsan Uygun gara TCDD Malatya 5.Region Directorate dịka akụkụ nke njem ahụ. Visga leta ụlọ ọrụ niile dị na mpaghara Directorate ụlọ ma soro ndị isi mpaghara Direction na-ahụ maka ọrụ na ebumnuche ndị otu a. [More ...]
Mbupụ Wagon na USA na TUDEMSAŞ na Nkwonkwo Ngalaba Nkeonwe
Sivas, guzosie ike 1939, 80 afọ, Turkey mere mmepụta na mmezi nke ụgbọ okporo ígwè ugbala Machinery Industry Co., Ltd. (TÜDEMSAŞ) na ụlọ ọrụ Gökyapı. Otutu ugbo ala nke uwa ka emeputara [More ...]
Estram na-eche banyere ịdị ọcha
Eskişehir Metropolitan Municipality na-eme ihe ntanye kwa ụbọchị iji mee ka ụmụ amaala nwee udo nke uche. A na-ehichapụ 47 tram, nke na-ezute ọrụ njem njem ọha na eze Eskişehir kwa abalị n'etiti 22.00 na 06.00 awa. [More ...]
Ilgbọ okporo igwe na-aga n'ihu na Ankara Sivas YHT Project
Ọrụ okporo ụzọ dị na Yerköy-Sivas na-aga n’ihu na Ankara-Yozgat-Sivas YHT Project, nke bụ otu n’ime ụzọ dị mkpa nke ụzọ ụgbọ okporo ígwè na-ejikọ mba Eshia n’okporo ụzọ Asia Minor na Silk ma ga-esi belata Yozgat Ankara n’etiti minit 55. Ilgbọ okporo ígwè na eriri Yerköy-Sivas [More ...]
Ndị njikwa ụlọ ọrụ Hema bịara TÜDEMSAŞ
Dị ka otu n'ime Turkey si eduga akpakanamde engineering ụlọ ọrụ, traktọ, ewu ígwè, ụgbọelu na Hema Industry bụ a ụlọ ọrụ na-emepụta ihe ndị zuru ụwa ọnụ na-azara ọnụ ụlọ ọrụ gara TÜDEMSAŞ Hema Vice President of Industry uloru St. ashram, [More ...]
Onye isi ala EkBB Ekrem İmamoğlu tinyere okpu agha nke aha ya na ya, yikwasị uwe ya ma nyocha ndị ọrụ ya na Kabataş-Mahmutbey ebe a na-ewu mgbidi. N'ịza ajụjụ ndị odeakụkọ n'ọnụ ụzọ ọwara metro, İmamoğlu kwuru, “Istanbul chọrọ ọtụtụ metro. Ọnọdụ Istanbul na mbu [More ...]
Onye isi oche Esen na TCDD General Manager Atụrụ
Iankırı Mayor İsmail Hakkı Esen zutere TCDD General Manager Ali İhsan Uygun na ndị nnọchi anya ha. N'oge nzukọ a na-eme na Onye isi oche, TCDD na Municipality tụlere ọrụ ndị ahụ n'okpuru ụkpụrụ 7 February 2012. [More ...]
Okporo ụzọ nnukwu okporo ụzọ nke Ankara-Egwurugwu, Ụzọ E Si agafe Ụzọ na Ụzọ Ụlọ Akwụkwọ
Obodo ukwu nke Ankara, 65 puku mita anọ nke ụzọ okporo ụzọ n'etiti April na June, 4 puku mita mita anọ nke ịgafe agafe na usoro ọgba aghara na-eme n'okporo ámá na n'okporo ámá dị n'ime ọrụ. Obodo ukwu obodo ukwu nke Science Works Road Asphalt [More ...]
Nyocha Ahịa nke 1915 gaa na Canakkale Bridge
Na nwube nke 1915 Çanakkale Bridge, Ömer Bolat, onye nchịkwa mpaghara nke gburugburu ebe obibi na obodo ukwu, na ndị na-ahụ maka ọrụ ya. Onye Ochichi mpaghara nke Òtù Na-ahụ Maka Nkwekọrịta Ọha na eze Sezgin KÜÇÜKBEKİR na Director Ömer BOLAT [More ...]
Murat 124 ndị enyi na Bilecik
Murat 124 hụrụ hụrụ na Bilecik na ihe omume nke ghọtara na onyinye nke Bilecik Municipality. Site na Istanbul ruo Kahramanmaraş, site na Adana ruo İzmir, ihe omume ahụ kpọkọtara ndị na-ahụ maka oge ochie site na 81 obodo ma malite site n'ogige ahụ e guzobere na Pelitözü Gölpark. Mgbe njem obodo, ndị Sheikh [More ...]
Nnwale Ule na Darussalam Morogoro Railway
Ugbo mbu nke ndi oru ugbo tinyere ndi oru Transport Minister Isack A. Kamwelwe, onye isi oche TRC Masanja Kadogosa na Korail DSM Project Manager na 06.07.2019 na oru DSM (Darussalam Morogoro) SGR na United Republic of Tanzania [More ...]
Nkume eserese East Express na-aga n'ihu na ọkwa mba
Ikinci Türk Telekom 'TAM O' AN 'N' AHU 'ANYA' N 'AHU OZU' AHU 'AHU' AHU 'AHU' AHU 'AHU AHU AHU AHU AHU AHU AHU AHU AHU AHU AHU AHU AHU AHU AHU. [More ...]
TÜDEMSAŞ na -emezi nkwupụta Ụdị Wagon Dịka Mkpa
Nurettin Demirpolat, onye isi oche nke Board of Directors of the Demirpolat Group of Companies, nke nwere ụlọ ọrụ iri dị iche iche na ụlọ ọrụ logistics na nri, gara TÜDEMSAŞ iji kwurịta nyochaghachi nke ụgbọ okporo ígwè Talns dị ka ụlọ ahịa nke ụlọ ọrụ. TÜDEMSAŞ [More ...]